ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြီး ပြီးဆုံး သွားမယ့်အချိန်နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားမယ့် ပုံစံ - Zet Star
ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြီး ပြီးဆုံး သွားမယ့်အချိန်နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားမယ့် ပုံစံ
ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic) ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
SARS ဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သလဲ? SARS တုန်းက ကူးစက်မှုကွင်းဆက်ပြတ်သွားခြင်းပါ။ ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကို အဲ့ဒီတုန်းက အသေအချာ မပြန့်ပွားအောင်နောက်ဆုံးမှာ ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတောင် ၂၀၀၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကနေပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလအထိကြာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး outbreak လေးက တရုတ်ပြည်မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ပြန်သွားဖြစ်ပါတယ်။ SARS ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလေ့လာနေတဲ့ Institute of Virilogy က ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကျောင်းသားက သုသေသနလုပ်နေရင်းကူးသွားတာပါ။ သူကနေ ကျန်တဲ့သူတွေကို ကူးခဲ့ပါတယ်။
မေလထဲမှာလည်း ပေကျင်းက ကူးစက်ရောဂါဌာနဓာတ်ခွဲခန်းကနေ SARS ဗိုင်းရပ်စ်ကို သုသေသနလုပ်နေရင်း SARS ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။ သူကနေ ၆ ယောက်ထပ်ကူးပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေက ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုသေသနလုပ်ရာမှာ biosafety အားနည်းတာနဲ့ ကူးစက်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်ဆိုတာပြပါတယ်။
သူတို့ကနောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပြီး ၃ ပတ်အကြာမှာ Case အသစ်မပေါ်တော့လို့ WHO က တရုတ်မှာ SARS ရောဂါကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက SARS အတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေစတင်သုသေသနလုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် SARS ပျောက်ကွယ်သွားလို့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပါ။
အဲ့ဒီသုသေသနရလဒ်တွေဟာ အခု Covid မှာ ပြန်အသုံးတည့်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအဓိကပြောလိုတာက SARS အတွက် ကာကွယ်ဆေးလုံးဝမလိုခဲ့ပါ။ SARS ဖြစ်ရင် သေနှုန်း ၁၀ ရာနှုန်းရှိလို့ လူတွေကသေမှာကြောက်လန့်ပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာလာကြပါတယ်။
လူတွေသာတကယ်စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ရောဂါကူးစက်မှုကွင်းဆက်ကိုဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic) ကို ပျောက်ကွယ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ SARS နဲ့ Covid-19 မတူတာက Covid-19 က ပိုကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ တကမ္ဘာလုံးကို ထိန်းချုပ်လို့မနိုင်အောင်ပြန့်သွားခဲ့ပြီမို့ Covid-19 အတွက် ကာကွယ်ဆေးလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ၁၉၁၈ ခုနှစ် စပိန်တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါကြီးဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားသလဲ သိဖို့လိုလာပါတယ်။?
Dr Almirante ရဲ့အဆိုအရ community transmission ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် Pandemic ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့။ Community transmission ဆိုတာ လူထုကြားထဲအစရှာမရပဲကူးစက်မှု ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
သဘောက မြို့တစ်မြို့မှာတွေ့တယ်။ အဲ့ဒီလူက ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိ၊ ရောဂါရှိသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တာမရှိဆိုရင် ဒါဟာ လူထုကြားထဲအစရှာမရပဲကူးစက်မှု (community transmission) ပဲ။ အဲ့ဒီမှာမပြီးမဆုံးနိုင် လူထုကြားထဲပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းမလိုက်နာလေပိုပြန့်လေ -> လူပိုသေဆုံးမှုပိုများလေဖြစ်လာပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်တို့ကိုကြည့်ပါ။ အိန္ဒိယ – လူပေါင်း ၄ သန်းနီးပါးကူးစက်ထားပြီး လူ ၇ သောင်းနီးပါးသေဆုံးထားပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် – လူပေါင်း ၃ သိန်းကျော်ကူးစက်ထားပြီး လူ ၄ ထောင်ကျော် သေဆုံးထားပါတယ်။
ဒါ Covid ပြီးရင် Covid ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ၊ ရောဂါနောက်ဆက်တွဲတွေလာအုန်းမှာပါ။ အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှာ မတ်လကတည်းက အစိုးရကဘယ်လောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ခဲ့ပေမယ့် လူတွေကစည်းကမ်းမလိုက်နာလို့ အခြေအနေကထိန်းမရအောင်ဆက်ဖြစ်သွားတာပါ။
၁၉၁၈ ခုနှစ် စပိန်တုပ်ကွေးဟာ (၃) လှိုင်းလာပြီးမှ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယလှိုင်းမှာ အကြီးအကျယ်သေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပထမလှိုင်း၊ ဒုတိယလှိုင်း၊ တတိယလှိုင်းတွေပြန်လာခဲ့ရတဲ့ အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်း (၃) ချက်သွားတွေ့ပါသတဲ့။
(၁) ကျောင်းတွေအဖွင့်အပိတ်၊ (၂) ရာသီဥတုအပူချိန်အပြောင်းအလဲ၊ (၃) လူတွေရဲ့ကပ်ရောဂါအပေါ်တုန့်ပြန်မှု (ကြောက်လန့်ပြီးစည်းကမ်းလိုက်နာမှုရှိမရှိ) စတဲ့သုံးချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး တကျော့ပြန်လှိုင်းဝင်တတ်ပါသတဲ့။
အဲ့ဒီမှာ လူတွေရဲ့အမူအကျင့် (human behaviour) အပေါ် တွေ့ရတဲ့အချက်က ကပ်ရောဂါကြောင့်သိပ်ပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ရင် ခပ်ပေါ့ပေါ့ နေကြစားကြပါသတဲ့။ အဲ့ဒီမှာ ဒုတိယလှိုင်းက mutation နဲ့တွေ့ပြီး ရောဂါပြင်းထန်ခဲ့ရင် လူအသေအပျောက်များတတ်ပါသတဲ့။
၁၉၁၈ ခုနှစ် စပိန်တုပ်ကွေးကပ်မှာ ရောဂါအကူးခံရတဲ့လူတွေလည်းအတော်သေပြီးပြီ။ မသေတဲ့လူတွေမှာလည်း ရောဂါခံနိုင်ရည် immunity ရပြီးပြီ။ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း မပေါ့ဆရဲတော့ပဲ စည်းကမ်းလိုက်နာလာတဲ့အတွက် စပိန်တုပ်ကွေးကပ်ပျောက်သွားတယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Covid-19 ဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားမှာလဲ?
အဓိကက ရောဂါကူးစက်မှုကွင်းဆက်ဖြတ်နိုင်ရင် ပျောက်ကွယ်သွားမယ်။ အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုကွင်းဆက်ကိုဖြတ်နိုင်မယ်။
ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာရင်၊ လူတွေစည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ခပ်ခွာခွာနေနိုင်ရင်၊ ကူးစက်မှုအရမ်းများသွားတဲ့အခါမှာ လူထုအတွင်း herd immunity ရသွားရင်၊
လူတွေ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ခပ်ခွာခွာနေဖို့က မဖြစ်မနေတွန်းအားပေးပြီး လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်သလောက်မလွယ်ပဲ စီးပွားရေး၊ လူမှု​ရေးတွေပါ တွဲပါပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စပါ။ ပါးစပ်ပြောတာသာလွယ်တာ လက်တွေ့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။
လူထုထဲကူးစက်မှုအရမ်းများပြီး herd immunity ကိစ္စက ပေးဆပ်ရမယ့်တန်ဖိုးကအလွန်ကြီးပါတယ်။ Covid ဟာရောဂါအသစ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေအရ herd immunity အောင်မြင်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်။ herd immunity ကိစ္စကလည်း ပါးစပ်နဲ့သာအပြောလွယ်တာ လက်တွေ့မှာမလွယ်ပါ။
ကျိန်းသေပေါ်နိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နက်ဖြန်နောက်ဆုံးထားပြီးရေးပေးပါ့မယ်။ အဲ့ဒီတော့ Covid-19 ဘယ်အချိန်ပျောက်သွားမလဲဆိုရင်….
လူတွေကစည်းကမ်းကို တတ်နိုင်သလောက်လိုက်နာပြီး Covid case တွေနည်းအောင် ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်း၊ ကံအကြောင်းမလှလို့ အကူးခံရသူတွေဆီမှာ herd immunity လည်းတစ်ဖက်က အနည်းငယ်ရလာချိန်၊ အားကိုးရတဲ့ကာကွယ်ဆေးလည်းတကယ်လူထုကြားထဲရောက်လာချိန်မှာ
Community transmission ကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Covid-19 ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ WHO က Covid-19 လုံးဝကင်းစင်သွားပြီလို့ ကြေညာချိန်ဟာ အစောဆုံး 2021 ဇွန်လလို့ မှန်းထားပါကြောင်း။
← ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်တွေကို မရှင်းလင်းသူများအတွက်
တခြားမြို့တွေ ဘယ်လောက် ပိတ်ပိတ် ရန်ကုန်ကတော့ မြန်မာပြည်အနှံ့က ပြည်သူတွေကို ရင်ဖွင့်ကြိုနေဆဲပါပဲ →